‘गलत व्यक्तिले सुकुम्बासी भन्दै लालपुर्जा लिए कारवाही हुन्छ’ « Lalitpur Khabar
‘गलत व्यक्तिले सुकुम्बासी भन्दै लालपुर्जा लिए कारवाही हुन्छ’
मधुसुदन पौडेल सरकारले केही समयअघि गठन गरेको भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका ललितपुर प्रमुख हुन् । ललितपुरमा भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान र यतार्थ तथ्याङ्क संकलन गर्न यो आयोग सहयोगी हुनेछ । यसै सन्दर्भमा पौडेलसँग ललितपुर खबर प्रतिनिधिले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ पौडेलसँगको कुराकानीको सम्दादित अंश :
ललितपुरमा सुकुम्बासीहरुको पहिचान कसरी गरिन्छ ?
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भूमिहिनका लागि जग्गा दिलाउनका लागि जिल्ला जिल्ला कार्यालय र केन्दिय आयोगसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन गर्छन् । आयोगले गर्ने काममध्ये आधाजस्तो काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । गाँउ तहमा कति सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास छ त्यसको छानविन गर्ने फारम भराउने काम वडा तहको हुन्छ ।
ललितपुरमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि के कस्ता काम भएका छन् ?
जिल्लामा हामी नियुक्त हुनु अघि नै ललितपुरको गोदावरी र महालक्ष्मी नगरले सम्झौंता गरेर काम सुरु गरेको थियो । महालक्ष्मी नगरमा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या धेरै नभए पनि गोदावरी नगरमा भने अलि धेरै छ । गोदावरीमा लगत संकलनको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । हामी अन्य पालिकाहरुसँग सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न केही दिन अघि छलफल भइसकेको छ । जिल्लाका राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुसँग हामीले छलफल सुरु गरेका छौं । त्यस बैठकबाट अव अन्य पालिकाहरुसँग सम्झौंता गरेर काम सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा सबै सहमत छौं ।
दक्षिण ललितपुरमा पनि सुकुम्बासी समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ । तर सही तथ्याङ्क लगत संकलनपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।
अन्य ठाँउमा समेत जग्गा भएका स्थानीयबासीहरु कतिपय ठाँउमा वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् उनीहरुका हक के के हुन्छ ?
कतिपय ठाँउमा वन क्षेत्रमा समेत बसोबास रहेको पाइन्छ । उनीहरु साँचिकै सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास के हो छुट्याउन जरुरी छ । यो काम स्थानीय स्तरमा वडा र गाँउपालिका वा नगरले गर्छ । यसको छानविन समेत हुन्छ । अतिक्रमित किसिमले बसेको भए स्थानय तहले लगन संकलन गर्दैन । यसको कानूनी अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
कतिपय ठाँउमा लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा बसेकाहरुको विषयमा स्थानीय तहबाट आएको खण्डमा हामी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेका परिवारमा सम्बन्धमा वन र आयोग दुवैले हेर्छ । कतिपय विवादस्पद कुराहरु आएको खण्डमा हामी छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं ।
भूमिसम्बनिध समस्या समाधान आयोगको जिल्लाका सदस्यहरु को को हुन्छन् ?
वनको कार्य क्षेत्र समेत पर्ने हुँदा जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख समेत सदस्य छन् । सदस्य सचिवको रुपमा एडिओ साहेव आफै छन् भने जिल्ला नापी र जिल्ला भूमि सुधारमा प्रमुख कार्य क्षेत्रमै काम गर्ने हुँदा उहाँहरु पनि यसमा हुनुहुन्छ । एक जना विज्ञ सदस्य रअर्का सदस्य र म आफै प्रमुख गरेर ७ सदस्य रहेका छौं ।
ललितपुरमा भएका सबै भूमिहिनहरुले तत्काल जग्गा पाउने अवस्था छ ?
लगत संकलन गरेर नहेरी यो कुरा भन्न सकिदैन । पहिलो त ललितपुरमा कस्ता खाले भूमि समस्या छ भन्ने नै लगत संकलन गरेर सबै आयोगको जिल्ला कार्यालयमा नआइ भन्न सकिदैन । हामी हाम्रो प्रयत्नमा सबैलाई जग्गा उपलव्ध गराउने प्रयास गर्नेछौं ।
यसमा अरु दुई वटा कुरा पनि जोडिएको छ । छलफलको क्रममा जिल्लाभर भूमिहिन र सुकुम्बासीको समस्या अलि कम देखिएको छ भने बर्षैदेखि बसोबास गरिएको तर लालपुर्जा नभएकाहरको समस्या देखिएको छ । ललितपुरमा विर्ताको जग्गामा बसेकाहरुको पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
विर्ता ऐन आएर विर्ता उल्मुलन भएको भनिएको तर विर्ताकै जग्गामा बस्नेहरुको समस्या समेत देखिएको छ । स्थानीय निकायले आदेश दिएर वर्षौदेखि बसेको स्ववासीहरुको अर्को समस्या देखिएको छ । उनीहरु दुईचार पुस्तादेखि बसेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण समस्या भएको बताएका छन् । हरिसिद्दि, ठैव, खोकना,बुङ्गमती र महालक्ष्मी नगरको विभिन्न ठाँउमा देखिएको छ । हामीलाई केन्द्रिय आयोगबाट यी समस्याहरु पनि हेर्न दिने भन्ने मौखिक कुरा भएको छ । कार्यादेश लिखित रुपमा आएको छैन । लिखित रुपमा कार्यादेश आएपछि हामी काम सुरु गछौं ।
भूमिहिनहरुका लागि जग्गा कहाँ कहाँको दिने योजना छ ?
हामीलाई कहि कतै जग्गा खोजेर दिने कुनै प्रावधान छैन । भूमिहिनहरु जहाँ बसेका छन् त्यही जग्गा दिने हो । अधिकतसम्म चार आना जग्गा दिन हामी सिफारिस गर्छौं । यसको कार्यविधि कस्तो छ भने पहिले लगत संकलन गर्ने,सर्जिमिनी गर्ने र विवाद आएको खण्डमा विरुपण गर्ने काम स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ । हामीले चाही जिल्लामा बसेर सिफरिस गर्ने हो । पूर्जा दिने काम चाँही केन्द्रिय आयोगको हो । हामीले लालपूर्जा दिने होइन । हाम्रो काम समन्वय गर्ने हो । फलोअप गर्ने स्थानीय निकाय र केन्द्रिय आयोगको बीच पुलको काम हामी गछौं । विवाद आएको खण्डमा विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने हो ।
गाँउमा जग्गा भएका तर सुकुम्बासी भन्दै शहरको मूल्यवान जग्गामा आएर बस्नेहरु पनि उनीहरुलाई सुकुम्बासीकै रुपमा जग्गा वितरण हुन्छ ?
यसमा स्थानीय निकायबाट कसरी आउछ त्यसमा भर पर्छ । मैले त्यो समस्याको बारेमा धेरै सुनेको छु । महानगरभित्र यस्ता खाले धेरै समस्या आएको भन्ने कुरा आएको छ । अहिले मौखिक कुरा आएको छ । तर लिखित रुपमा आएको छैन । हामी ती सबै कुरा खोजविन गर्ने र छलफल गर्ने काम गछौं ।
कोही गलत व्यक्तिले प्रकृया पु¥याउदा पु¥याउदै जग्गा पायो भने कारवाही हुन्छ कारवाही भएको खण्डमा कसलाई कारवाही गर्ने प्रावधान छ आयुक्तहरु नै तानिने अवस्था त आउदैन ?
हुन सक्छ । यसको आफ्नै ठाँउमा चेकअप हुन्छ । हामीले २ वटा फारम भर्ने व्यवस्था गरेको छौं । रातो फरम र सेतो फारम । रातो फारम देशभर कँहि कतै जग्गा नभएकोले मात्रै भर्ने हो । सेतो फारम अरु ठाँउमा पनि जग्गा भएको तर लामो समयसम्म त्यस ठाँउमा बसेको व्यक्तिले भर्ने हो ।
फारम भरेपछि स्थानीय निकायले उजुरी भए गर्न सूचना जारी गर्ने व्यवसथा छ । दावी उजुरी आए छानविन हुन्छ । त्यस व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । नगरले सबै विवरण संकलनपछि सार्वजनिक सुनुवाई गरेर छानविन गर्छ ।
गलत व्यक्तिले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बासोबास गरेको भन्दै लालपुर्जा लिए के हुन्छ ?
हामीले पनि आएका डकुमेण्ट हेर्ने र सकेसम्म फर्जी नहोस् भन्ने विषयमा ध्यान दिन्छौं । कानूनले नै गलत विवरण भराउने व्यक्तिलाई जरिवाना गराउनेछ भने सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई पनि जरिवानाको व्यवस्था छ ।
कसैले गलत तरिकाले जग्गा लिएको खण्डमा लालपूर्जा रद्द गरेर एक वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ ।
‘लुभु सडक विस्तारको समस्या समाधान गर्ने उपाय मसँग थियो’
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका उत्तरपुर्वी ललितपुरको काँठ क्षेत्रमा रहेको नगर हो । तत्कालीन लुभु, लामाटार,सिद्धिपुर,इमाडोल र
‘उन्युचौर सवस्टेशन ललितपुरमा विद्युतको समस्या समाधान’
गोविन्दप्रसाद बजगाँई दक्षिण ललितपुर विद्युत् सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । नेपालको पहिलो विद्युत् सहकारीको रुपमा
‘कोञ्ज्योसोममा पुर्वाधारका काम धेरै भएका छन्’
दक्षिण ललितपुरको कोञ्ज्योसोम गाँउपालिका ८० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या तामाङ्ग समुदायको बसोबास गर्ने गाँउपालिका हो
‘महिलाका लागि हस्तकला व्यावसायमा धेरै चुनौतीहरु छन्’
सवितासिंह महर्जन महिला हस्तकला महासंघको मेला संयोजक हुन् । उनी महासंघको कार्यसमिती सदस्यरहेकी छिन् ।
फेरि कान्ति लोकपथ सडकमा ढलान हुने
आजदेखि देशभर खोप अभियान शुरु, ११ दिनसम्म चल्ने
कोञ्ज्योसोम गाँउपालिकाले थरको पछाडि तामाङ लेखाउन निकाल्यो सूचना
बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधान धरौटीमा रिहा